Xiddiga chess -ka Georgia ayaa dacwad ku soo oogaya Netflix si uu ugu yeero Ruushka
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Films » Xiddiga chess -ka Georgia ayaa dacwad ku soo oogaya Netflix si uu ugu yeero Ruushka
Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Crime • dhaqanka • Films • Georgia War Cusub • News • Dadka • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka Mareykanka • Wararka kala duwan
Netflix ayaa si geesinimo leh oo ula kac ah uga been sheegtay guulaha Gaprindashvili ee ujeedada raqiiska ah iyo kuwa qallafsan ee 'kor u qaadidda riwaayadda' iyada oo ka dhigaysa inay u muuqato in halyeeygeeda khiyaaliga ah uu ku guuleystey inuu sameeyo waxa ayna jirin haweeney kale, oo uu ku jiro Gaprindashvili.
Horyaalka chess -ka Joorjiya wuxuu gudbiyaa dacwad sumcad dil ah oo ka dhan ah Netflix oo si khaldan u muujisay taxanahooda.
Netflix ayaa lagu eedeeyey inay si aad ah u galmoodaan una yaqyaqsadaan, waxayna si cad u been yihiin taxanahooda TV -ga.
Nona Gaprindashvili ayaa dacwad ka dhan ah Netflix ka gudbisay Maxkamadda Degmada Federaalka ee Los Angeles.
Superstar-ka chess-ka Georgia Nona Gaprindashvili ayaa dacwad ka dhan ah Netflix u gudbisay $ 5-milyan oo ah inuu yahay 'jinsi aad u weyn' wuxuuna ku muujiyey inay tahay Ruush-ka taxanaha taxanaha ah ee 2021 ee 'The Queen's Gambit'.
Nona Gaprindashvili, oo ah haweeneydii ugu horreysay ee gaarto heerka saynisyahanno caalami ah iyo horyaalkii shanaad ee haweenka adduunka, ayaa dacwad ka gudbisay Netflix iyada oo tixraacaysa iyada oo ku jirta bandhigga ugu sarreeya, oo ay ka muuqato mucjiso khayaali ah oo sii wadata garaacista ciyaartoyga ugu wanaagsan Ruushka Moscow intii lagu jiray 1960 -kii.
Mid ka mid ah dhacdooyinkii soo jiray ilaa 1968, faalleeye ayaa sheegaya in ciyaaryahanka chess -ka ee Nona Gaprindashvili uusan waligiis la kulmin rag. Laakiin tani waa qalad, ”ayuu yiri garyaqaan Maya Mtsariashvili, oo shuraako la ah BLB, oo ah shirkad sharciga Georgia ka wakiil ah ciyaaryahanka, ayaa maanta yiri.
Qareenka ayaa intaas ku daray in shaqadooda dacwadda ay bilaabatay wax yar kadib Netflix Siidaynta taxanaha TV -ga.
Gaprindashvili, 80, ayaa ka reebtay qayb ka mid ah qaybtii ugu dambaysay ee taxanaha oo qeexaya "waxa kaliya ee aan caadi ahayn ee iyada ku saabsan" inay tahay jinsi.
“Xitaa taasi maahan mid ku gaar ah Russia, ”Qaybta dhacdadu way sii socotaa. "Waxaa jira Nona Gaprindashvili, laakiin iyadu waa haweeneyda horyaalnimada adduunka weligeedna ma aysan la kulmin ragga."
Dacwadeeda sumcad -dilidda ee laga gudbiyay Maxkamadda Degmada Federaalka ee Los Angeles, Gaprindashvili ayaa la sheegay inay ku tilmaamtay inay tahay "si cad been abuur, iyo sidoo kale inay aad u jinsi badan tahay oo quursan tahay," waxayna sheegtay in 1968, ay la kulantay ugu yaraan 59 chess lab ciyaartoy.
Cabashada ayaa sii socota: “Netflix si geesinimo leh oo ula kac ah uga been sheegay guulaha Gaprindashvili ee ujeeddada raqiiska ah iyo tan qallafsan ee 'kor u qaadidda riwaayadda' iyagoo ka dhigaya inay u muuqato in halyeeyga khiyaaliga ah uu ku guuleystey inuu sameeyo waxa ayna jirin haweeney kale, oo uu ku jiro Gaprindashvili. "
Dacwada ayaa sidoo kale sheegeysa in Gaprindashvili lagu aflagaadeeyay xaqiiqda ah in Netflix waxay ku tilmaantay ciyaartoy Ruush ah.
Wakiilada Gaprindashvili ayaa sidoo kale sheegaya in sharaxaadda Joorijiyaan maaddaama Ruushku yahay kiis "ku sii qulqulaya cay dheeraad ah dhaawaca" oo sameeya dhowr sheegasho oo ku saabsan xiriirka labada dal.
Afhayeen u hadlay Netflix ayaa yiri: "Netflix waxay xushmad weyn u haysaa Ms Gaprindashvili iyo xirfadeeda sharafta leh, laakiin waxaan aaminsanahay in sheegashadani aysan mudnayn oo ay si xoog leh u difaaci doonto kiiska."